Họtelu ndi di na Akure, Ondo - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Hotels in Ijapo Estate
Hotels in Oke-Ijebu
Hotels in Okuta Elerinla
Hotels in Alagbaka
Hotels in Oyemekun
Hotels in Oshinle Quarters
Filled with rocks, little waterfalls and bountiful forests, the historic city ...
Ihe Nkowa banyere Akure
Akure, bu nke a na akpo obodo nke anwụ ochicha bụ isi obodo na obodo kasị ukwuu na Ondo Steeti nke di na mpaghara obodo ndịda-ọdịda anyanwụ nke Nigeria. Obodo a bụ obodo nke akụkọ ihe ndi mere mgbe ochie na Nigeria, dika ọ bu nke dịrị n'okpuru isi ochichi alaeze Benin (Benin Kindom) na narị afọ nke iri na asaa (18th senchuri) na kwa n'okpuru isi ochichi alaeze nke Ịbadan (Ibadan Kindom) na narị afọ nke iri na itolu (19th senchuri).
Nkem tụrụatụ bu nke na arutu aka lagachi azụ ga na afọ okwute bu nke ahụrụ ná mpụga nke obodoAkure na Igbara-Oke. Na igbakwunye n'ịbụ obodo nke azumahia, Amara Akure di ka ebe orụ ugbo na arụpụta ji, owu, akpu, ọka na ụtaba.
Idanre Hills bụ otu n’ime ebe njem nleta di na Akure. O di otutu puku ato di elu kari ogugo nke oké osimiri na ihe nile di ndu di nime ya, nke ihe omenala obodo chikotaraworo n'elu ya nke otutu oge.Idanre Hills bụ otu n'ime ihe nke okike uwa kasị mma na ala Nigeria. Nke a na agụnye ogige ebe ihe omenala ndị dị ka “Obí nke onye eze” (Owa’s Palace), otutu ihu arụsị, Ulo ikpe ochie, Belfry, akara ukwu nke Agbooogun, mmiri nke égbè eluigwe (Omi Apaara ) na ogige ebe ili ozu. Ọ bụ ogige nke ókè anuri ya na enweghi nsotu ma o bu na a dighi agwu agwu.
Hotelu Ndi Di na Akure
E nwere ọtụtụ họtelu dị ịche ịche na Akure; họtelu ndi ama ama na Akure gụnyere; Jojein họtelu na Royal Birds họtelu & Towers.
Họtelu Ijapo Estate Họtelu Okuta Elerinla Họtelu Oke-Ijebu Họtelu Alagbaka Họtelu Oyemekun Họtelu Akoko
Họtelu Odigbo Họtelu Ondo Town Họtelu Owo Họtelu Okitipupa Họtelu Ile Oluji/Okeigbo Họtelu Ilaje
Sunview Hotel La Point Hotel Emperor Hotel and Suites First Victoria Castle Hotel & Suites Winners Guest House Polak International Hotels Limited